एमाले अध्यक्ष ओलीलाई बधाई दिदै यसो भने डा. बाबुराम भट्टराईले Canada Nepal
Jan 18 2022 | २०७८, माघ ४गते
२०७८, माघ ४गते
युएईमा विस्फोट हुँदा ३ जनाको मृत्यु, ६ जना घाइते
जस्तोसुकै स्टन्ट दिन डराउँदिनन् दीपिका, शाहरुखको 'पठान'मा आफ्नै स्टन्ट दिँदै
प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिएकोमा बधाई दिदै राजेन्द्र महतोले भने - 'मधेश प्रदेशको पहिचान आज स्थापित भएको छ'
सन्तानको योजना बारे प्रियंकाको यस्तो खुलासा
सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बस्दै, प्रधानन्यायाधीश राणा सहभागी नहुने
एमाले अध्यक्ष ओलीलाई बधाई दिदै यसो भने डा. बाबुराम भट्टराईले
काठमाडौं - एमालेको १०औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा विजयी भएका केपी शर्मा ओलीलाई जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले बधाई दिएका छन् । नेता भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमाले अध्यक्ष ओली र उनको टिमलाई बधाई दिएका हुन् ।
उनले विगतका गलत विचार र कामबाट पाठ सिकेर बहुदलीय लोकतन्त्रमा जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न सद्बुद्धि प्राप्त होस् भन्दै शुभकामना दिएका छन् ।
उनले लेखेका छन् - "नेकपा (एमाले) महाधिवेसनबाट अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएका खड्गप्रसाद शर्मा ओली र वहाॅको टिमलाई हार्दिक वधाइ! विगतका गलत विचार र कामबाट पाठ सिकेर बहुदलीय लोकतन्त्रमा जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न सद्बुद्धि प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना!"
ओलीले अध्यक्षमा उठेका अर्का नेता डा भीम रावललाई फराकिलो मतअन्तरले पराजित गरेका हुन् । निर्वाचनमा दुई हजार १५३ जना प्रतिनिधि रहेकामा दुई हजार ९६ मत खसेको थियो । जसमा ओलीले १८०८ मत ल्याएका हुन् भने रावलले २२३ मत ल्याएका हुन् ।
केपी शर्मा ओली एमाले अध्यक्षमा विजयी, रावलको लज्जास्पद हार
मंसिर १५, २०७८ बुधवार १२:५६:०६ बजे : प्रकाशित
२५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुने कार्यक्रम रद्द गर्न नेकपा एमालेको निर्देशन
काठमाडौं - नेकपा एमालेले २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुने सबै कार्यक्रम स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ । देशभर कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै सोमबार एमाले केन्द्रीय कार्यालयले सर्कुलर जारी गर्दै सो निर्देशन दिएको हो ।
जारी सर्कुलमा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुने कार्यक्रम रद्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । यस्तै पार्टी नेता कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै जनताको सेवामा जुट्न पनि भनिएको छ ।
भनिएको छ - 'नेकपा (एमाले), केन्द्रीय कार्यालयले आज आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्दै कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै पार्टी तथा जनसंगठनका २५ जनाभन्दा बढी सहभागिता रहने सबै कार्यक्रमहरू स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, सबै कमिटी, नेता–कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरूलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै जनताको सेवामा जुट्न पनि निर्देशन गरिएको छ ।'
माघ ३, २०७८ सोमवार १९:१३:११ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - मधेश प्रदेशमा मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लागेको खुशिमा मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिइएको हो ।
लामो समयको बहसपछि सोमबार प्रदेशको नाम मधेश र राजधानी जनकपुर राखिएको छ । प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले प्रदेशको नाम मधेश र राजधानी जनकपुरलाई बहुमतले पारित गरेको हो ।
यहि खुशिमा मंगलबार मधेशमा सार्वजनिक बिदा दिइएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिए ।
माघ ३, २०७८ सोमवार १९:२५:४४ बजे : प्रकाशित
# मधेश प्रदेश
जनकपुरधाम - प्रदेश २ ले आफ्नो नाम टुंगो लगाएको छ । प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकले प्रदेश २ ‘मधेश प्रदेश’ नामलाई दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा भएको मतदानमा मधेश प्रदेशको पक्षमा ८० मत परेको हो । जुन दुई तिहाइ बहुमत हो ।
१०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा सोमबार भएको मतदानमा ९९ मत खसेको थियो । साथै यसअघि सोमबार नै प्रदेशसभाले प्रदेशको राजधानी जनकपुरलाई पारित गरेको थियो । प्रदेश २ ले नाम पाएपछि अब एक मात्र प्रदेश नामविहीन भएको छ ।
सातमध्ये ६ वटा प्रदेशको नामाकरण भइसक्कदा प्रदेश १ को भने नामाकरण हुन सकेको छैन । प्रदेश १ को स्थायी राजधानी भने विराटनगर कायम भइसकेको छ । २०७६ वैशाख २३ को प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको राजधानी विराटनगर कायम गरेको थियो । मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसक्दा समेत प्रदेशको नामाकरण हुन सकेको छैन ।
देश संघीय प्रणालीमा गएपछि प्रदेश सभामध्ये तत्कालीन प्रदेश ६ ले सबैभन्दा पहिला राजधानी र नाम टुंगो लगाएको थियो । उसले आफ्नो प्रदेशको नाम कर्णाली र स्थायी राजधानी वीरेन्द्रनगर कायम गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेश चारले आफ्नो नाम गण्डकी र राजधानी पोखरा कायम भएको थियो ।
त्यसपछि प्रदेशन ७ को प्रदेश सभाले आफ्नो प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरी, कैलाली हुने तय गरेको थियो । प्रदेश ३ ले आफ्नो नाम बागमती र राजधानी हेटौंडा रहने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, प्रदेश ५ को प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङ हुने निर्णय गरेको थियो ।
माघ ३, २०७८ सोमवार २०:११:५० बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बस्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पूर्ण बैठक बोलाएका हुन् । तर बैठकमा उनी भने सहभागी हुने छैनन् ।
प्रधानन्याधीशको राजीनामा न्यायाधीशहरुले माग्दै आएका कारण राणा भने बैठकमा नबस्ने जनाइएको छ । उनी बैठकमा नबसेपछि निर्णय कार्यान्वयनका लागि भने उनले हस्तारक्ष गर्ने छन् ।
माघ ३, २०७८ सोमवार २०:४८:५५ बजे : प्रकाशित
जनकपुरधाम - प्रदेश २ ले अन्तत: आफ्नो नाम मधेश र स्थायी राजधानी जनकपुरधाम पाएको छ । प्रदेश सभामा नाम र राजधानीको विषयमा सोमबार भएको निर्वाचनमा प्रदेशको नाम र राजधानी दुई तिहाई भन्दा बढी बहुमतले पारित भएको छ ।
प्रदेशको नाम मधेशको पक्षमा दुई तिहाई भन्दा बढी मत परेपछि प्रदेशको नामाकारणको विषयमा कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको मिथिला मधेश, नेकपा एकिकृत समाजवादी नेकपा एस र नेकपा एमालेले गरेको जानकी प्रदेश र कांग्रेसका सांसद राजेशवर प्रसाद साहले गरेको मध्य मधेश प्रस्ताव खारेज भएको सभामुख सरोज कुमार रायले बताएका थिए । प्रदेश नामाकरणको लागि आवश्यक दुई तिहाई अर्थात ७० मत चाहिएको ठाउँमा थप १० मत खसेपछि सभामुख रायले संविधानको धारा २९५ को उपधारार २ बमोजिम प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश घोषणा गरेका थिए ।
त्यसैगरि, जनकपुरधाम स्थायी राजधानीको पक्षमा दुई तिहाई मत परेपछि राजधानीको विषयमा थप रहेका दुई वटा प्रस्ताव विरगंज महानगरपालिका र विरगंज महानगरपालिकासहित पोखरियादेखि वाराको निजगढ सम्मको प्रस्ताव सभामुख रायले खारेजको घोषणा गरेका थिए ।
प्रदेश २ को नाम मधेश प्रदेश र स्थायी राजधानी जनकपुरधाम पारित भएको छ । हाल प्रदेशमा १०४ जना सांसद रहेकोमा उपस्थित ९९ जना प्रदेश सभा सदस्य मध्ये ८० जनाले नाम मधेशको पक्षमा र ७८ जनाले राजधानी जनकपुरधामको पक्षमा मतदान गरेका छन् । स्थायी राजधानी तोक्न ७० मत चाहिएकोमा थप ८ मत परेपछि सभामुख रायले संविधानको २८८ धाराको उपधारा २ बमोजिम स्थायी राजधानिको घोषणा गरेका गरेका थिए ।
प्रदेशको स्थायी राजधानीमा राजनीतिक दलहरुको संयुक्त प्रस्ताव भए पनि राजधानी भन्दा प्रदेश नामाकरणमा थप २ मत परेको छ । जबकी प्रदेशको नामाकरणमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा), र माओवादी केन्द्रको संयुक्त प्रस्ताव मधेश भएपनि कांग्रेस, नेकपा एस र एमालेको प्रस्ताव भन्ने अलग अलग रहेको थियो ।
नाम र राजधानीका लागि ७० मतको आवश्यकता थियो । तीन दलको संयुक्त प्रस्ताव मधेश प्रदेशको पक्षमा मतदान गरिएको थियो । सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको संयुक्त प्रस्ताव मधेश प्रदेशमा मतदान गरिएको थियो ।
यसैबीच, प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने ऐतिहासिक दिनमा पनि विभिन्न पार्टीका ५ जना सासद प्रदेश सभामा अनुपस्थित रहेका थिए । नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका सासद गोविन्द न्यौपाने, कांग्रेसका सांसद शोभा लामा, नेकपा एमालेकी सांसद अनिता यादव र जसपाकी सांसद डा. रिना यादव प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिरहँदा अनुपस्थित रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेशको स्थायी राजधानीमा दलहरुको प्रस्ताव संयुक्त रहेकोले त्यो मतदान प्रक्रियाबाट पनि पारित हुने सम्भवना प्रवल नै थियो । तर नामाकरणमा दलहरु सबै आफ्ना आफ्ना अडानमा रहेका कारण सोमबार पारित हुने सम्भावना कम देखिएको थियो । तर नामभन्दा राजधानीको प्रस्तावमा पहिलो मतदान हुँदा मधेश केन्द्रित दल जसपा, लोसपाका सासदहरुले त्यस दलका सांसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा रिझाउन सफल भएका थिए ।
प्रदेशको नाम र राजधानीमा पार्टीको ह्वीप पनि नलाग्ने भएकोले पनि कांग्रेस, नेकपा एकिकृति समाजवादी, एमालेका सांसदहरु पनि अन्तिम समयमा मधेशको नाममा मतदान गरेको श्रोतको भनाइ छ । यसैबीच, प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुरधाम तोकिएपछि स्थानीय व्यवसायिहरु उत्साहित भएका छन् ।
जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनकपुरलाई स्थायी राजधानीको रुपमो घोषणा गरिएपछि जुन सुकै प्रदेशका प्रदेश सांसद, प्रतिनिधी सभा सासद तथा राष्ट्रिसभाका सदस्यलाई जनकपुरको होटलको बास र गाँसमा छुट दिने घोषणा गरेको छ ।
सांसदहरुलाई होटल बसाईमा २५ प्रतिशत र खानामा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले जानकारी दिए । संघको निर्णयमा होटेल एशोसिएसन नेपाल प्रदेश २, होटेल व्यवसायी तथा पर्यटन संघ धनुषाले पनि समर्थन जनाएको छ ।
माघ ३, २०७८ सोमवार २१:३१:५१ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता राजेन्द्र महतोले प्रदेश २ को नाम मधेश र राजधानी जनकपुरधाम तोकिएको बधाई दिएका छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसमेत रहेको जनकपुर राजधानी भएको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
'मधेश आन्दोलनको उद्गम स्थल, मेरो निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको जगत जननी माता जानकीको जन्मभूमि ‘जनकपुरधाम’ प्रदेशको स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम ‘मधेश प्रदेश’ प्राप्तीको यस सुखद अवसरमा सम्पुर्ण क्षेत्रवासी, प्रदेशवासी तथा देशवासीमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु' उनले भनेका छन् ।
यि महत्त्वपूर्ण दुईवटै सफलतामा आफ्नो पार्टीको पनि प्रस्ताव र समर्थन रहेको उनले बताए । उनले राजधानी ‘जनकपुरधाम र नाम ‘मधेश प्रदेश’को पक्षमा मतदान गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दल र प्रदेशसभा सदस्यमा धन्यवाद दिएका छन् ।
'दशकौको मधेश आन्दोलन र संर्घष, मधेशी शहिदको सपना मधेश प्रदेशको पहिचान आज स्थापित भएको छ भने ति सम्पूर्ण आन्दोलन तथा संर्घषमा अहम भूमिका निर्वाह गरेको पावन भुमि जनकपुरधामको पनि सम्मान भएको छ ' उनले भनेका छन् ।
अव मधेश प्रदेशको मुख्य आर्थिक केन्द्र बिरगंजसहित सवै जिल्लाको केन्द्र, शहर, पालिका तथा वडाहरुको समुचित विकासका लागि सबै दल र नेताहरु सकारात्मक रुपमा काम गर्दै समाजिक रुपान्तरणका लागि एकजुट हुने विश्वास रहेको उनले बताएका छन् ।
माघ ३, २०७८ सोमवार २१:३६:२९ बजे : प्रकाशित